Xavi iyo Eto’o oo ka sheekeystay sidii Guardiola looga dhaadhiciyay inuu sii heysto weeraryahankii hore ee Barca – Gool FM
Xavi iyo Eto’o oo ka sheekeystay sidii Guardiola looga dhaadhiciyay inuu sii heysto weeraryahankii hore ee Barca
(Doha) 05 Maaajo 2020. Ciyaartoydii hore ee Barcelona, Xavi Hernandez iyo Samuel Eto’o ayaa ka sheekeystay waxyaabo badan oo ku saabsan waqtigoodii Barca iyagoo wicitaan muuqaal ah ku wada hadlayay, waxaana ay dib u milicsadeen xilligoo Xavi uu kala hadlay Pep Guardiola sii heysashada weeraryahankii hore ee qaranka Cameroon.
Macallinka hadda hoggaamiya Manchester City ayaa xagaagii 2008 la wareegay shaqada tababare ee Barcelona, iyadoo Eto’o uu ka mid ahaa ciyaartoyda macallinka reer Spain uu suuqa geynayay si safkiisa uu dib u habeyn ugu sameeyo.
Si kastaba ha ahaatee, Halyeyga khadka dhexe ee qaranka Spain ayaa isku dayay in Guardiola uu kala hadlo inay kooxdu sii heysato Eto’o oo ahaa gool dhaliye aad u wanaagsan.
“Waxaa mahad ah inaad sii joogtay, maxaa yeellay waxaad ku dhowaatay inaad baxdo,” ayuu Xavi ku yiri saaxiibkiis.
“Waa mahad inaad adiga weydiisatay inaan sii joogo. Waad ku mahadsan tahay arrintaas,” ayuu weeraryahankii hore ee Barcelona ku jawaabay.
Xavi Hernandez ayaa dareensanaa in Eto’o uu xubin muhiim ah ka ahaa kooxda Bluagrana.